“ဂႏၶဗၺ” ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား Red Carpet, After Show ! - Vloggest
“ဂႏၶဗၺ” ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား Red Carpet, After Show !...
Myanmar Celebrity Follow
ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ် နှင့် Kitaro Kanematsu တို့ ရိုက်ကူး ပုံဖော်ထားပြီး၊ သရုပ်ဆောင် ဒွန်နာလေးလာ၊ ရွှန်းရရှီရအိရှိ၊ ရွှန်းဆုဂတ၊ မိုရီဆာကီဝင်း၊ ရန်အောင်၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ စည်သူမောင် တို့ အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် “ဂန္ဓဗ္ဗ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Red Carpet Show တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု #MCLive
Myanmar Celebrity TV LIVE : Gandaba Movie Red Carpet Show at the JCGV Cinema, Junction City in Yangon on January 21. #GANDABA #GANDABAMovie #AungKoLatt #KitaroKanematsu #YanAung #MorisakiWin #KhinZarChiKyaw #SiThuAung Myanmar Celebrity TV
More from Myanmar Celebrity
Pyay Ti Oo + Eaindra K...
Myanmar Thingyan Song:...
Myanmar Male Popular D...
Miss ASEAN TV Charming...
Miss Tourism Beauty Pa...
"Celebrities' Night Sh...
5 Stars A Nyient Perfo...
Culture Fashion Show a...
Hip Hop Orchestra Conc...
PlayBoy Than Naing: Sw...
Degree Live Music Conc...
Miss Now How 2011 Beau...
Simpsons minifigures b...
Hans Teeuwen - Hard en...
ငတ်ငတ် ပြတ်ပြတ် တစ်သက်...
"မြက်နု" ရုပ်ရှင် ပရိသ...
President Trump’s atto...
ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝ...
29 ရတနာ ရဲ့ မြိတ်မြို...
ကင်းကောင် ကို လွမ်းဆွတ...
ဆယ်ကျော်သက် သား နဲ့ သမ...
TRY NOT TO LAUGH -DELL...
NEED TO BE LIFTING THI...
Coronavirus ability to...